बुवा ऋषिले अन्तिम सास लिंदै गर्दा संगै थिए रणवीर, छोराको बिहे गरेर म’र्ने इच्छा थियो ऋषिको ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/बुवा ऋषिले अन्तिम सास लिंदै गर्दा संगै थिए रणवीर, छोराको बिहे गरेर म’र्ने इच्छा थियो ऋषिको !
बलिउड अभिनेता ऋषि कपूरको निधन भएको छ । उनको ६७ वर्षको उमेर बिहीबार बिहान निधन भएको हो । यसअघि बुधबार मात्रै अभिनेता इरफान खानको निधन भएको थियो । बलिउडले लगातार दुई हस्ती गुमाएको हो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई मंगलबार मुम्बईको एचएन रिलायन्स फाउन्डेसन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । ऋपि कपूरका दाइ रणधीर कपूरले उनको निधनको पुष्टि गरेका हुन् । उनी क्यान्सर रोगबाट पीडित थिए । कपूर गएको सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा क्यान्सरको उपचार गराएर फर्किएका थिए । उनी क्यान्सरको उपचारका लागि अमेरिकामा एक वर्ष बसेका थिए । गएको फेब्रुअरीमा उनको स्वास्थ्यमा पुनः समस्या देखिएको थियो ।
क्यान्सरसँग जुधिरहेका उनलाई स्वासप्रस्वासमा पनि समस्या भएकाले मंगलबार अस्पताल भर्ना गरिएको दाइ रणधीरले बताएका थिए । ऋषि कपूरले सन् १९७३ मा बबी चलचित्रबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेका थिए । उनले बालकलाकारका रुपमा श्री ४२० र मेरा नाम जोकर चलचित्रमा काम गरेका थिए । ऋषि कपूरका छोरा रणवीर कपूर बलिउडका हालका स्टार अभिनेता हुन्। उनको निधनप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै अभिनेता अमिताभ बच्चनले आफू ‘क्षतविक्षत’ भएको उल्लेख गरेका छन् । बच्चनले ट्वीट गरेका छन्, ‘उनी गए…ऋषि कपूर…गए…भर्खरै बिदा भए.. म खण्डित भएँ ।’
अस्पतामा अन्तिम सास लिँदै गर्दा उनको वरिपरी श्रीमती नीतु कपूर तथा छोरा रणवीर र छोरी रिद्धिमासहित परिवारका सदस्य रहेको जनाइएको छ । उनको अन्तिम चलचित्र इमरान हाशमीसँगको द बडी हो । उनी अभिनेत्री दीपिका पादुकोणसँग उनी हलिउड चलचित्र द इन्टर्नको हिन्दी रिमेकमा काम गर्ने तयारी थिए ।
पछिल्लो समय रणवीरका पिता ऋषि कपुरले उनीहरुको बिबाह गरिदिन लागेको बताएका थिए । ऋषिले यो जोडी छिट्टै बिबाह बन्धनमा बाँधिएको हेर्ने रहर भएकाले बिबाह गरिदिन लागेको बताएका थिए । लामो समय देखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका यो जोडीको विवाहको खबर पनि बेला बेलामा चर्चामा आउँने गरेको थियो । पछिल्लो सयम फिल्म ‘ब्रह्मस्त्र’को सुटिङपछि बिवाह गर्दे भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भएको थियो । तर त्यो लकडाउनको कारण रोकिएको भारतीय मिडियाले जनाएको थियो । एक रिर्पोट अनुसार आलिया र रणवीरको विवाह समारोह २१ डिसेम्बरमा सुरु हुने छ ।
सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय ऋषिले अप्रिल २ यता केही पोस्ट गरेका थिएनन् । त्यसअगाडि उनले दीपिका पादुकोणसँग फिल्म खेल्न लागेको घोषणा गरेका थिए । यो फिल्म हलिउड फिल्म ‘द इर्टन’को हिन्दी रिमेक हुनेछ । अमेरिकाबाट फर्किएपछि जुही चावलासँग ‘शर्माजीकी नम्किन’को सुटिङ गरेका थिए तर स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि बीचमै सुटिङ रोकिएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ । ऋषि कूपर दिग्गज अभिनेता राज कपूरका छोरा हुन्। ऋषि कपूरले आफ्नो फिल्मी करियरको सुरुवात १९७३ मा बाबी फिल्मबाट गरेका थिए। त्यसपछि श्री ४२० र मेरा नाम जोकरमा उनी देखिए।
बुधबारमात्रै बलिउडले एक चर्चित अभिनेता इरफान खानलाई गुमाएको थियो । खानको बुधबार अन्तिम संस्कार गरिएको छ। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि कोकिला वेन धिरूभाइ अम्बानी अस्पतालको आइसीयूमा इरफान खानलाई मंगलबार भर्ना गरिएको थियो। बुधबार नै खानको निधन भएको हो। उनको अन्तिम विदाईमा मात्र २० व्यक्ति उपस्थित भएका थिए। मुम्बईको भरसोभा कब्रस्तानमा स्थानीय समयअुनसार अपरान्ह ३ बजे खानको अन्तिम संस्कार भएको हो। उनको अन्तिम विदाईमा परिवार, नातेदार र नजिकका साथीहरुमात्र उपस्थित थिए। कोरोना भाइरसको प्रकोपबीच निधन भएपछि सानो संख्यामै उनको अन्तिम संस्कार गरिएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। खानको कोलोन इन्फेक्सनका कारण निधन भएको जनाइएको छ। गत शनिबार मात्रै उनकी आमा सइदा बेगमको निधन भएको थियो। उनकी आमा ९५ वर्षकी थिइन्।
ट्रक र बस एक आपसमा ठोक्किँदा कम्तीमा आठ मजदुरको मृत्यु